JOS Nepal » विज्ञान/प्रविधि
के तपाईलाई थाहा छ, मृत्यु पछि पनि मानिसको आँखाले देख्ने र कानले सुन्ने काम गर्छ !
कति लाई थाहा नहुन पनि सक्छ, रुचि लिएर अन्तसम्म पढी दिनु होला । मृत्यु पछि पनि मानिसको आँखाले देख्ने र कानले सुन्ने काम गर्छ ! सुन्दाखेरी यो कुरा नपत्याउदो र वाहियात लाग्ला तर यो कुरा सत्य हो । किनभने मानिसको मुटुले काम गर्न छोडे पछी पनि करिब ६ मिनेट सम्म मानिसको मस्तिष्क (Brain) मरेको हुँदैन ! कहिलेकाहीँ एकदमै.....
काठमाडौ-: अपाङ्ग भएका व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन भन्ने धारणा विपरीत मोरङ घर भई हाल काठमाडौँमा बस्दै आएका २९ वर्षीय चित्र पौड्यालले अपाङ्ग भएर पनि विश्व अपाङ्ग साइकलयात्री बनेर आफूलाई विश्वसामु चिनाउन सफल भएका छन्।नेपालबाट सुरु गरेको उनले साइकल यात्राले भारत, श्रीलङ्कालगायत ६५ वटा देशको भ्रमण पूरा गरिसकेका.....
खुसिको खबर,विद्युत् उत्पादन दोब्बर, भारत र बाङ्लादेश निर्यात गरिँदै। सक्दो सेयर गरौ !
काठमाडौं-: निर्माण सम्पन्न हुनै लागेका जलविद्युत् आयोजना हेर्दा आउँदो वर्षात देखि नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा हाल एक हजार मेगावाट हाराहारी रहेको विद्युत् करिब एक हजार मेगावाट थपिएर दोब्बर.....
पति छविले कुटेपछि गुहार माग्दै प्रहरी समक्ष पुगिन् नायिका शिल्पा पोखरेल !
काठमाडौं, २५ असार -: निर्देशक तथा पति छविराज ओझाबाट निरन्तर हातपात भएको भन्दै नायिका शिल्पा पोखरेल उनीबिरुद्ध उजुरी दिन प्रहरी समक्ष पुगेकी छिन् । आफ्नो ज्यू-ज्यानको सुरक्षा गराई पाउँ भन्दै प्रहरी समक्ष पुगेकी छिन् । नायिका पोखरेलले आफ्नै श्रीमानबाट असुरक्षा भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि यो घटना.....
नुवाकोटको महाकाली वडा नम्बर ८ की अनु तामाङ कुवेतमा बेचिएकी छन । ५/६ महिना अघि दलालको प्रलोभनमा परि भारत हुँदै कुवेत पुगेकी तामाङलाई अहिले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगिरहेकी छन । राम्रो पैसा सहितको राम्रो काम पाउने आशामा कुवेत पुगेकी तामाङ अहिले आफुलाई उद्धार गर्न पनि अपिल गरिरहेकी छन। उनले फेसबुकमा भिडियो.....